पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ श्रावण ७ गते (सन् २०२१ जुलाई २२ तारीख) बिहीबार – Rastriya Yuvajagaran Nepali News
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ श्रावण ७ गते (सन् २०२१ जुलाई २२ तारीख) बिहीबार
मा प्रकाशित | धर्म/संस्कृति, राशिफल, समाज
पुर्पुरोमा जे लेखिए पनि भाग्यसँगै कर्म गरौं । यतिखेर सबै भुगोल र समुदायमा कोरोना भाइरसको असर देखिइरहेको छ । सरकारको निषेधाज्ञा कहिँ खुकुलो कहि कडा पारिएको छ । तरपनि कोरोनाको प्रभावबाट बच्न र बचाउन पर्ने दायित्व हाम्रो छँदैछ । यसर्थ कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरु स्वास्थ्य मापदण्ड, सामाजिक दुरीका साथ सचेत भई आफू सुरक्षित रहे परिवार, समाज र देश सुरक्षित रहन्छ भन्ने हेक्का सदैव राखौं ।
मेष – समय शुभ र सफलतादायक छ । पारिवारिक सुख बढ्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । आफन्तको साथ प्राप्त हुनेछ । यश बढ्नेछ । रोकिएको काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । सुख सम्पति मान महत्त्वमा बढोत्तरी होला । आमोद प्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त होला । कार्यव्यापारमा सफलता प्राप्त होला । रोकिएको काम बन्नेछ । यश फैलिनेछ । मांगलिक कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ ।
बृष – दौडधुप बढ्नेछ । विलासमा रुचि बढ्नेछ । शारीरिक रआर्थिक कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । जोखिममा नपर्नु उचित होला ।
मिथुन – यात्रामा सफलता मिल्नेछ । अन्नधन बढ्नेछ । व्यस्तता र आयस्रोत बढ्ला । भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । सुखको कर्ममा प्रवृत्ति बढ्नेछ । कार्यव्यापारमा प्रगति होला । प्रेमपात्रसित मिलन हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम पनि बन्नेछ । मित्रजन सन्तान आदिका साथ पाउनुहुनेछ । पारिवारिक कलह शान्त हुनेछ
कर्कट – उन्नति पदोन्नति हुनेछ । आयस्रोत वृद्धि हुनेछ । आर्थिक समस्याको समाधान प्राप्त हुनेछ । मान महत्वमा कमी आउनेछैन । हासविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । देखापरेको समस्याको समाधान खोज्नुहुनेछ । कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय र ठुलो रकमको लगानीमा समर्थ रहनुहुनेछ ।
सिंह – आशा उत्साह बढ्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा सफलता मिल्नेछ । हाकिमको साथ मिल्नेछ । कर्ममा रुचि बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । लगानी उठ्ला । खेलकूदमा भाग लिनुहुनेछ । यात्रा गर्नुहुनेछ । सुख आनन्द बढ्ला । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुख सम्पदा बढ्ला । आरोग्यता बृद्धि होला । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । बौद्धिक रचनात्मक र कलात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सुखशान्ति बढ्नुको साथै कार्यमा सफलतमा मिल्नेछ ।
कन्या – वार्तामा सफलता प्राप्त हुनेछ । धन मान महत्वमा कमी आउने छैन । समस्याको समाधान मिल्नेछ । विकासको काममा प्रवृत्ति बढ्ला । मान महत्व बढ्ला । साहस बढ्नेछ । अरुको भरभन्दा आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित हुनेछ । ऐनकानूनले साथ दिनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
वृश्चिक – धन सम्पति बढ्ला । साहसिक काम बन्नेछ । मान महत्व बर्चश्व बढ्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । सुख आनन्द बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । विजयश्री प्राप्त होला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख सुविधाको वस्तु किन्नुहुनेछ । योजना र बजेट बनाइ कार्य गर्दा बेस होला । ऋण, रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ ।
धनु – सुख सफलता बढ्नेछ । आयस्रोतमा पनि बढोत्तरी होला । रोकिएको काम बन्नुसँगै उधारो लगाइएको धन पनि उठ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य काम बन्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । गीतसंगीत र रसरागात्मक काममा आकर्षण बढ्नेछ । सन्तानसुख बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला ।
मकर – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । नियमकानूनले साथ दिनेछ । भएको दायित्वलाई पूरा गर्नु हुनेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित नहोला । योजना र बजेटमा बल बढ्नेछ । राजकिय काम गर्नु बेस रहला । आयस्रोत बढ्ला ।
कुम्भ – कुनै पनि प्रकारको शारीरिक र आर्थिक विकाससित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य पनि बन्नेछ । नयाँ आयस्रोत बर्द्धक काममा सफलता पाउनुसँगै इष्टमित्र र सन्तानको सुख मिल्नेछ । लगानी उठ्ला । रोकिएको काम बन्नेछ । आरोग्यता र ऐश्वर्य वृद्धि होला । साझेदारीको काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला ।
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ श्रावण ११ गते (सन् २०२१ जुलाई २६ तारिख) सोमबार